Biography of Vera Vasilyeva
Ukuba ngumlando wokuphila, umdlali waseSoviet noRussia, osebenza ngenkundla yaseshashalazini futhi edlala indima eminingi ebhayisikobho, wazalwa edolobheni elincane laseSukhoi Ruchey, elisendaweni yaseTver. I-Biography kaVera Vasilyeva inzima futhi iyathakazelisa, ngoba nje ngemva kokubeletha kwakhe wonke umndeni wathuthela eMoscow enkulu. Phakathi nesikhundla sakhe eside somsebenzi, lo mdlali, owazalwa ngaphambi kwempi ngoSepthemba 30, 1925, wathola imiklomelo eminingi kanye neziqu, phakathi kwazo kwakuyiziqu ezimbili ezihlonishwayo zaseStalin (ngo-1948 no-1951).
Abazali bezinkanyezi ezizayo babe ngabantu abavamile: umama wasebenza efektri, wafunda izifundo zokuhlwa zakumklami futhi wakhuphula amadodakazi amathathu, kanti ubaba wayengumshayeli wezinkampani ezifanayo. EMoscow, i-biography kaVera Vasilyeva igcwele izenzakalo ezingokomfanekiso ezizomholela embonweni yaseshashalazini. Akukho ukuphila endaweni yokuhlala, noma ubude obuphelele ngenxa yokuqashwa kwabadade nabazali asebekhulile akuzange kumvimbele ukuba abe omunye wezithombe ezitholakala kakhulu e-USSR yangaphambili naseRussia yanamuhla.
Le ntombazane yafunda okuningi, ikhetha izincwadi zakudala, kodwa yayiyi-Bolshoi Theater, okwakhiwa "uMlobokazi kaTsar" okwenza uVera aqaphele umgomo oyinhloko wokuphila kwakhe. Ngokumangalisa kakhulu impilo yangemva kwe-scenes nokuthi kwenzekani esiteji, uqala "ukugwinya" zonke izincwadi ezitholakala kule ndaba. Eminyakeni yempi eyinkimbinkimbi, kwadingeka ahlehlise iphupho lendawo yaseshashalazini futhi aqale ukusebenza efektri noyise ngemva nje kwesikole.
Ngokushesha ngemva kokuphothula iziqu, uVera wazama ukungena esikoleni esidumile saseCycus, kepha akazange akwazi ukudlulisa ukuhlolwa ngokomzimba. Kodwa akazange alahlekelwe futhi kakade ngo-1943 waba umfundi we-Moscow Theater School, umholi wayo wayeyiVV Gotovtsev odumile. Ngo-1945, i-biography ka-Vera Vasilyeva iqala ukumgcwalisa ngezindinganiso ezingenakufa emabhayisikobho naseshashalazini. Esokuqala kwakuyisitho esincane esithombeni se-Soviet esibizwa ngokuthi "amawele". Futhi ngo-1947, umlingisi uVera Vasilieva, owaziwa yilokho kuhlanganisa izinkulungwane zezenzo zemidlalo yaseshashalazini kanye nemisebenzi engaphezu kwama-50 emafilimu, uba ngumlingisi oyinhloko wefilimu ethi "The Tale of Land Siberia", eyamletha udumo lomhlaba wonke. Isibonelo, ukusebenza "Wedding ne-dowry", okwakhiwa nguB. Ravensky, ngokuhlanganyela kwakhe kudlalwe izikhathi ezingaphezu kuka-900.
I-Biography kaVera Vasilyeva ithola i-twist entsha ngemuva kweminyaka emithathu yokuthandana avuma ukwamukela ukunikela kwesandla nenhliziyo evela kumdlali odumile uVladimir Ushakov. Abalingani bakhe endaweni yesehlakalo ngezikhathi ezehlukene kwakungu-V. Gaft no-A. Shirvindt. Wadlala emidlalweni yaseshashalazini yase-Orel naseTver. In theater "Modern" Vera Vasilieva wenza ngokuyinhloko umdlalo "Ngaphandle Kwesikhathi eParis" futhi uthola ukuqaphela hhayi nje kuphela isizukulwane pre-impi, kodwa futhi nentsha yanamuhla.
Esikhathini samanje, umnikazi womklomelo "Crystal Turandot" uyaqhubeka nokusebenza kwakhe futhi uhoxiswa ngokuqinile ochungechungeni lwethelevishini: "Ama-Times Angakhethi", "Matchmaker", "Beauty Salon", "Into Ehlanganisiwe Ngendlu." UVera Vasilieva, owaziwa ngaye ogcwele isikhathi esibucayi nesicindezelayo, uthanda ukukhuluma ngama-cartoon. Wanika amazwi kubalingiswa abavela emidwebo ethandwa kakhulu: "Umka ufuna umngane", "Amabalazwe amabili" nethi "The Wizard of the Emerald City". Ngomnikelo wakhe ekuthuthukiseni ubuciko bezobuciko, wanikezwa i-Order of Merit yebanga lika-Babaland, IV no-III ngo-2011.
Biography Yuri Yakovlev - umlingisi we cinema Soviet kanye Russian. Indlela yokuphila, ifilimu, izihloko nemiklomelo. Izingane zika-Yuri Yakovlev
"AbakwaMidshipmen, phambili!": Abadlali be-series-mini futhi namhlanje
Indlela uHarry Potter aqoshwe ngayo - indaba emlandweni
I-Nikolai Koster-Waldau - i-biography, ifilimu kanye nokuphila komuntu siqu
Uhlu: amafilimu "ama-95 quarters", okufanele abone kuwo wonke umuntu
Vaclav Havel - sezindiza e Prague
Izici eziyinhloko isayensi, izici
Indlela yokwenza sefenisha "Maynkraft" futhi anikeze indlu
Inja uphefumula ngokuvamile i vula umlomo: i izimbangela kanye nezici ukwelashwa
"Amaqhawe ezintathu" (inganekwane): kumbhali inganekwane, sifinyeto amagama amaqhawe inganekwane
Sirius Beach 4 * (St UConstantine Elena, Bulgaria.): Incazelo ye-ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Ukwakheka "Aquatex": zokubuyekeza komsebenzisi
Ziyini izimbangela indlebe ukuminyana?